Soomaaliya, 28 August 2019
Sabriye: Dowladdu ma jebin heshiiska Ahlu-Sunna
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jebin heeshiiskii lala galay ururka Ahlu Sunna Wal-Jamaaca, sida ay Ahlu-Sunna shalay ku eedeysay dowladda.
Dad ku dhintay roobab ka da'ay Hargeysa
Colonel Caarre oo iska difaacay eedeo loo jeediyey
Jeneraal Saciid Cawil Jaamac ( Caarre) oo dhawaan ka goostay ciidamada Somaliland, ayaa iska fogeeyay eedo uga yimid taliyaha guud ee ciidamada Somaliland sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Taani.
Guuleed: Dowladda fursad ha siiso dadka Galmudug
Madaxweynihi hore ee maamul goboleedka Galmudug, Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay dhexdhexaad ka ahaato xaaladda siyaasadeed ee Galmudug, isla markaana ay fursad siiso dadka gobolka.
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 484-aad
Hay'ado ka digay qorshaha Kenya ee qaraarka 1267
Dowladda Kenya ayaa ku boorineysa Qaramada Midoobay in Al-Shabaab ay ku darto liiskeeda argagixisada, gaar ahaan kan ay ku jiraan Al-Qaacidda iyo ISIS, hase yeeshee hay’adaha caalamiga ah ayaa ka digay in taasi ay horseedi karto dhibaato bani’aadannimo.
Ahlu-Sunna: Dowladda way jebisay heshiiskii
Ururka Ahlu- Sunna Wal-Jamaaca ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa goor dhowayd soo saaray war-saxaafadeed ku eedaynayaan dawladda Soomaaliya inay jebisay heshiiskii dhexmaray labada dhianc horranatii bishii hore.